Olee otú ị naghachi data gị ike mbanye gị laptọọpụ? Ọ dịghị, ọ dịghị unu mkpa anya na-eme nke a na-ejikarị, mgbe gị na laptọọpụ na-arụ ọrụ ezi. Otú ọ dị, gịnị ma ọ bụrụ na ị chọta laptọọpụ kwụsịrị na-arụ ọrụ? Dị otú ahụ a dịruru ná njọ, nanị ụzọ ịzọpụta gị dị oké ọnụ ahịa data bụ nyefee ya site laptọọpụ si ike mbanye ọzọ laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa.
Diski ike bụ akụkụ kasị mkpa maka ihe ọ bụla laptọọpụ dị ka ọ nwere ihe nile dị mkpa data iji rụọ ọrụ azụmahịa gị na onye data. Ọ bụrụ na ndị na laptọọpụ ọkọkpọhi nwụrụ anwụ ọ bụ ike naputa site na ma ọ bụghị ihe niile na-efu. Ị nwere ike naghachi data na a abụọ n'ụzọ ga-enyere gị aka naghachi gị data.
Olee otú ịrụ a laptọọpụ data mgbake mgbe laptọọpụ bụ nwụrụ anwụ?
Ọ bụrụ na gị na laptọọpụ bụ ihe nwụrụ anwụ ma na ị chọrọ na-achọ n'aka gị ga-wepụ ike mbanye si na laptọọpụ na mgbe ahụ jikọọ ya na ndị ọzọ na kọmputa ma nweta ya. Otú ọ dị, ọ bụghị mfe karịa ọ na-ada n'ihi na ọ ga-agụnye oghere nke gị na laptọọpụ. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịrụzi gị na laptọọpụ mgbe ahụ ị na-achọghị imebi ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eso nzọụkwụ ndị a ị nwere ike na ntukwasi-obi wepụ draịvụ ike gị.
Mepee azụ panel nke gị na laptọọpụ, nke encloses ike mbanye. Na-emekarị e nwere mgbe a panel n'elu diski ike ịmata ọdịiche ya. All laptọọpụ nwere dị iche iche ọnọdụ nke diski ike, n'ihi ya, chọta gị na laptọọpụ si.
Echegbula e nweghị wiring stof na ị ga-akpụ. A na-enwekarị onu ma ọ bụ na taabụ na idaputa na diski ike nri.
Ozugbo diski ike bụ, ị ga-achọ a USB interface na-abịa na draịvụ ike. Ị nwere ike ịzụta ha online. Nke a interface-enye gị ohere jikọọ diski ike na kọmputa na USB.
Ugbu a jikọọ na diski ike na iji eriri USB na-abịa na interface ọ bụla na kọmputa.
Ọ bụrụ na diski ike na-arụ ọrụ ezi, ọ ga-achọpụtara dị ka USB nchekwa na ngwaọrụ ma ị ike iji aka idetuo niile dị mkpa faịlụ.
Ịkpachara anya mgbe dọpụtaara diski ike. Gụọ ihe ndị na-emepụta akwụkwọ ntuziaka ma ọ dị mkpa na otú na-emeghe ma wepụ ike mbanye ma ọ bụ na-akpọ onye teknishian inyere gị aka.
Olee otú ịrụ a laptọọpụ data mgbake ma ọ bụrụ na laptọọpụ ka na-arụ ọrụ?
Ọ bụrụ na gị na laptọọpụ na-arụ ọrụ ezi ma diski ike gị na-adịghị faịlụ ị chọrọ. Ọ bụrụ na ha na-ehichapụ n'amaghị ahụ, echegbula. E a zuru okè ngwọta na-akpọ Wondershare Data Iweghachite software. Nke a software bụ otú mfe iji na-eme ka mgbake usoro ire ụtọ. Full version nwere ike zụta si ukara website ma ị nwekwara ike gbalịa free version si website. E nwere ma Mac na Windows version. Ebe a na-ya atụmatụ:
-Ọ Nwere ike naputa niile ụdị data gụnyere akwụkwọ, media, executable faịlụ, ozi ma ọ bụ ozi ịntanetị, Archive na ọtụtụ ndị ọzọ.
-This Software-arụ ọrụ niile ụdị nchekwa na ngwaọrụ dị USB, camcorder, ebe nchekwa kaadị, ike draịva, egweri bins wdg
-ọ Bụrụ na data na-efu site na mberede, virus agha, ịgbanwee ihichapụ, formatting, na-ezighị ezi na ime ihe na ọtụtụ ndị ọzọ.
-Software Dị mfe ma dị mma iji. Ọ naghị emerụ gị na kọmputa na-enye dị mfe interface mgbake usoro.
Nke a software na-arụ ọrụ maka ma Mac na Windows. Download nwoke version na wụnye ya na kọmputa gị. E nwere bụghị ọtụtụ ịmụta banyere otú iji a software dị ka ọ nwere kensinammuo interface na mfe usoro na bụ onwe-nkọwa. Ị nwere ike naghachi gị data na nanị atọ nzọụkwụ.
Atọ iji naghachi data si laptọọpụ ike mbanye iji Wondershare Data Recovery:
Download nwoke version maka kọmputa gị, wụnye ya na kọmputa gị. Jide n'aka niile omume na-agba ọsọ si diski ike ị chọrọ iji naghachi data bụ gbanyụọ. Ẹkedori software na mgbe ahụ gaa Echefuola faịlụ Iweghachite nhọrọ nke bụ ihe mbụ na ndepụta.
On ọzọ ihuenyo, ị ga-ahụ ndepụta nke partitions ma ọ bụ nchekwa ngwaọrụ jikọọ kọmputa gị. Chọta disk na ị chọrọ iṅomi maka furu efu faịlụ na họrọ ya. E nwere dị iche Doppler nhọrọ dị ka nke ọma Doppler wdg Họrọ onye ị chọrọ iji. Ugbu a pịa na iṅomi.
Chere maka Doppler ịrụcha. Oge iwere ga-adabere na nchekwa size nke disk. Ozugbo usoro okokụre. Ị ga-ahụ ndepụta nke recoverable faịlụ. Ịhụchalụ ha ma ọ bụrụ na ị chọrọ tupu ị weghachi ha. Na-aga site ndepụta, ego niile faịlụ na ị chọrọ iji naghachi. I nwekwara ike ọnọdụ ha, nke pụtara na àgwà nke faịlụ ga-abụ mgbe mgbake. Niile i nwere ime bụ ugbu a pịa Malite.
All faịlụ ga-natara na kọmputa gị na otu ebe dabere na software ndabere mmepụta ọnọdụ.
Atụmatụ na iji gbochie gị na laptọọpụ si data ọnwụ
-Always Ndabere gị data ma na ígwé ojii ma ọ bụ na ndị ọzọ siri ike disk.
-Make N'aka na ị na-eji antivirus na-virus agha pụọ.
-Use Ịba uru software dị ka Akụ ruo na-diski ike gị ike.
-Avoid Ọ bụla ujo ma ọ bụ bumping ọrụ gị na kọmputa.
Ndị a bụ nanị ụfọdụ n'ime ndị kasị mma isi hụ na gị na data anọgide nchebe, ọbụna ma ọ bụrụ gị na laptọọpụ adịghị. Ọ dịghị ihe ọzọ fretting banyere furu efu data mgbe - na data bụ ebe a na-anọ na gị.
> Resource> Draịvụ> laptọọpụ Data Recovery - Olee otú naghachi Data si Draịvụ Gị laptọọpụ